10ယူနစ်စာ ငွေသွင်းပြီး 350,000ကျပ်အထိ ကံထူးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး
1. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် k9winမှ မန်ဘာအားလုံးအတွက် ဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
2. ဤပရိုမိုးရှင်းသည် 28/5/2022 ရက်တွင် စတင်ပါသည်။
3. ငွေတစ်သောင်းကျပ်သွင်းပြီး အခမဲ့ကံစမ်းမဲလက်မှတ်တစ်စောင်ရယူနိုင်ပါသည်။
4. ကံစမ်းမဲဆုငွေတန်ဖိုး 350,000ကျပ်
5. ငွေသွင်း(အကြိမ်ရေ)ပေါ်မူတည်ပြီး ကံစမ်းမဲလက်မှတ်ရရှိနိုင်မည်။
ဉပမာ-မန်ဘာတစ်ယောက်50,000ကျပ် ငွေတစ်ကြိမ်သွင်းပြီး လက်မှတ်တစ်စောင်သာ ရယူနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ 10,000ကျပ်5ကြိမ်သွင်းပါက လက်မှတ် 5စောင်ရယူနိုင်ပါသည်။
6.မန်ဘာတစ်ယောက်သည် တစ်နေ့လျှင်လက်မှတ်အစောင်ရေ5စောင်ထိသာ လက်ခံရယူနိုင်ပါမည်။
8.ကံစမ်းမဲလက်မှတ်အား 24 နာရီ ရယူနိုင်ပါသည်။
9.ည 7နာရီနောက်ပိုင်းယူထားသည့်ကံစမ်းမဲများသည် နောက်တစ်နေ့အတွက် အကြုံးဝင်ပါမည်။
10.ကံစမ်းမဲရလာဒ်သည် FAFA 2D3D4D မှ ရလာဒ်ဖြစ်ပါသည်။
မန်ဘာများအနေဖြင့် ဤကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါက k9win Customer service သို့ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်ပါတယ်ရှင့်
viber : https://cutt.ly/vDxmaDp
website : k9mmk.com
JILI စလော့ အတွက် ဘောနပ်စ်ငွေ 1,000,000kyats အထိ ပေးနေပါပြီ
1. ယခုပရိုမိုးရှင်းသည် K9WIN အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
2. ယခုပရိုမိုးရှင်းပြန်အမ်းငွေသည် JILI စလော့ တွင်သာ ရရှိနိုင်သည်
3. အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းရော အဖွဲ့ဝင်သစ်ရော ပါဝင်နိုင်သည်။ ပရိုမိုးရှင်းကို တခါသာ တောင်းဆိုနိုင်သည်။
4. အမြင့်ဆုံးဘောနပ်စ် 1000 ယူနစ် အထိ‌‌ ဖြစ်ပါသည်။
5. လောင်းကစားငွေ5ဆ ဖြစ်မှသာ ဘောနပ်စ်ငွေ ထုတ်ယူရန် တောင်းဆိုနိုင်မည်။
50 ယူနစ် သွင်းပြီး 150 ယူနစ် ရယူပါ
100 ယူနစ် သွင်းပြီး 200 ယူနစ် ရယူပါ
300 ယူနစ် သွင်းပြီး 400 ယူနစ် ရယူပါ
500 ယူနစ် သွင်းပြီး 600 ယူနစ် ရယူပါ
700 ယူနစ် သွင်းပြီး 800 ယူနစ် ရယူပါ
900 ယူနစ် သွင်းပြီး 1000 ယူနစ် ရယူပါ
သွင်းငွေ 50,000 ကျပ် မှာ 50,000 credits + 100,000 ဘောနပ်စ် = 150,000 ကျပ် ရရှိမည်။
လောင်းကစားငွေ စုစုပေါင်း 150,000 x5ဆ = 750,000 ရရှိမှသာ ငွေထုတ်ယူနိုင်မည်
Official Facebook : https://www.facebook.com/k9mmk